Awuyi kukholwa, kodwa akukho nto ikhuselekileyo kunokuba isisiseko. Xa usebenzisa nayiphi na into ewela phantsi kwengalo yakho. Emva kwakho konke, izinto eziqhelekileyo zenzelwe ukukhuselwa zixhobo sakho kuphela. Oku kungalindelekanga. Kukhuselekile kwinqanaba lombono. Emva koko, akukho nto yezinto ezinjalo ayikho isikhali. Abayi kubangela ukukrokra kumhlaseli aze abe "othulileyo" umkhuseli wakho. Ukongezelela, izinto ezinjalo azifanelekanga ukuba ube kunye nawe. Bahlala kunye nawe. Bahamba nawe.
Umntu onesishukumiso, isakhono kunye nokuthanda ukuhlala ehlala eyazi indlela yokuzikhusela kubundlobongela. Angasebenzisa phantse nayiphina into njengesikhali. Yonke into ingaba sisixhobo xa isikhali esiyinhloko sisengqondweni yakho. Urhulumente akakwazi ukunqanda, amasiko awakwazi ukuwuthabatha kunye nexesha kuphela xa ungenalo iphupha. Nantsi isifundo esibalulekileyo omele ufunde kweli nqaku.
Uza kufunda indlela yokusebenzisa izixhobo ezilungeleleneyo. Ukusebenza kwayo kunokuxhomekeka kwindlela amahle akho amehlo ngayo ngokujonga ngokukhawuleza kunye nokukhethwa kwesi "sikhali" kunye nokukwazi kwakho ukusebenzisa le nto. Sebenzisa ngale ndlela ukukhubaza umhlaseli ngokufanelekileyo. Le yikhono lakho eliphambili, eliya kunyuka kuphela ukuba kukho uqeqesho olufanelekileyo.
Qala amagama ambalwa malunga nokuzikhusela. Uke wabukela iimfazwe? Yiyiphi impendulo yokuqala yomntu ohlaselwa? Okokuqala, uthatha isikhali ukuvimba naluphi na ukuhlaselwa. Ukuba akukho nanye, ngokuqhelekileyo uthatha nayiphi na into engasetyenziswa njengezixhobo. Ngokuqhelekileyo enye yezinto zokuqala ezinjalo, umzekelo, isihlalo. Isetyenziswa njengekhuselo. Ingummangaliso ongokwemvelo kunye nendalo, ehambelana nabadlali abanamava, kunye nabantu abangenamava ekuzikhuseleni. Ngokuqhelekileyo, oko uza kuzikhusela kuxhomekeke kwisimo sakho sengqondo, izinga lobudlova kunye nemeko ngokwayo. Ngokomzekelo, abanye abantu babamba isihlalo ngexesha lokuhlaselwa kwaye basebenzise kuphela njengekhuselo. Eminye, abaqhawe abanogonyamelo baqala ukuhlaziya umhlaseli. Ukusetyenziswa kwesihlalo okanye enye into ekhuselekileyo ingaba luncedo ekuqaleni (ngokukodwa kwimeko yokuhlaselwa ngokukhawuleza). Kufuneka ufumane ulawulo ngokukhawuleza kwiintshaba ngokusebenzisa amandla.
Ngokuqhelekileyo akunakwenzeka ukukhawuleza ukuba yiyiphi into oyisebenzisayo yokukhusela. Awunaso ixesha lokulinganisela ukuphumelela kwento enye kwenye. Kuya kuza namava. Into ephambili kukuba phantse nayiphi na into inokusetyenziswa njengesikhali okanye ubuncinane ikhuselo. Nangona kubonakala ukuba ezinye izinto zisebenza kakuhle kunezinye.
Ngezantsi uluhlu lwezinto ezininzi ezinokuthi zisetyenziswe njengezixhobo okanye izikhuselo eziphuculweyo:
Inketho elula kwaye inempumelelo kakhulu ayiyiyo yokuzikhusela kuphela, kodwa nokuhlaselwa, xa kuyimfuneko. Yibambe iqhosha phakathi kweminwe ephakathi, kwaye ngesandla sakho ucinwe kwisitebe, hit! Ukubetha kuya kuba namandla amaninzi. Ukongeza, isitshixo siza kuba "uhlobo", olubuhlungu buhlungu kumhlaseli. Kungcono ukuphawula ebusweni.
Njengoko ilizwi lisithi: "Ipeni inamandla kunekrele." Ewe, ewe, yinto engokomfanekiso. Kukho nawuphi na, asisebenzisi ikrele kwimpilo yemihla ngemihla. Kodwa ipeni ihlala ikholisa. Olu hlobo "oluthandwayo" phakathi kweenkosi ezikhuselekileyo zokukhusela kubundlobongela. Isibambo singasetyenziswa njengezixhobo zokugwaza. Gcina umunwe wakho kwi "klibhokisi" okanye ekupheleni kokugqithisileyo kwaye uhlawule okanye ujikeleze ngokugqithiseleyo ekupheleni. Ukubethelelwa kwesibindi, kumathishini athambileyo entanyeni kuya kunika umphumo omkhulu.
Ibhotile yebhiya okanye ezinye iibhotile zeglasi:
Qaphela oku. Ungacingi ukuba ngokuphula ibhotile malunga nantoni na, uya kufumana isixhobo esihle, njengasekhishini. Akunjalo. Enyanisweni, into oyishiyayo yinto encinane yentamo yebhotile. Yonke into. Awukwazi ukwenza nantoni na. Nangona kunjalo, phantse yonke into oyibonayo kwiTV ayisebenzi, kwaye ukuba uzama, uya kuba neengxaki ezinkulu. Ungasebenzisa iibhotile zeglasi njengesikhali, nje ngokutshitshisa ngqo kumntu ohlaselayo! Kukhethwa ukusetyenziswa kweebhotile zeglasi, kuba izinto ezingenanto ziza kusebenza kangangoko.
Igubha leKhofi, iglasi okanye iikomityi:
Sitshitshise ubuso bomhlaseli kunye nebhotile yeglasi. Ukuba unesitya eshushu kwikomityi yakho - ngakumbi! Ukushisa kungcono njengesikhali esinye.
Ikhuselo elikhulu elithuthukisiwe. Udoti ungaphoswa kumhlaseli, oya kukunika ixesha lokuphepha okanye ukusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo.
Shoeflyadka etafileni yombhede okanye esifubeni:
Isixhobo sokuzivikela esiphezulu kakhulu, ukuba uhlaselwe kwigumbi lokulala. Zibambe kwaye zikhuphe iqhosha. Ingasetyenziswe njengekhuselo okanye nokuba yipembelelo yesikhali, njengepopopi okanye incwadi. Hlola isihlangu sakho uze ubone ukuba kuphuma ngokupheleleyo kwaye kulula. Ukuba akunjalo, zama ukulungelelanisa.
Enye yezona ndlela ezifanelekileyo zezinye izixhobo. Unamandla amakhulu okumbetha! Kulula ukuyisebenzisa kwaye iphumelele kakhulu. Ukongezelela, uhlala kunye nawe, ulungele ukukhubaza umhlaseli okanye ukuvimba ukuhlaselwa kwakhe.
Izixhobo eziqhelekileyo eziqhelekileyo. Utshise umhlaseli entloko okanye ebusweni. Phonsa i-cigarette butts kunye nomlotha ebusweni bakhe njengokuphazamiseka.
Kwifomu edibeneyo, ingaba sisixhobo esihle kakhulu. Ukusetyenziswa kokusebenza ngokukhawuleza, okuqinileyo, okufutshane, okufutshane, kwiindawo ezibuhlungu kakhulu. Uninzi kaninzi - emehlweni.
Kungekudala, omnye wabantu abadumileyo abasebenzisa i-laptop njengesikhali ngokumelene nepaparazzi. Ngaphezu koko, kusebenza kakhulu. Waye "wamtshiza" ubuso bomxhaphazi. Unokwenza okufanayo. Uyakwazi nje ukubetha intloko njengawe nawuphi na into enzima.
Isetyenziswe ngendlela efanayo ne-laptop. Ngako-ke kunemiqolo engqinileyo kwaye ke ibukhali, nangona kunjalo, ngakwinye icala, nayo inomlinganiselo omncinci kwaye ingaba lula ngakumbi. Nangona kunzima kakhulu.
Okulungileyo kungekuphela kokufunda nokufunda. Isetyenziswe ngendlela efanayo ne-laptop.
Kuhlala kusekhona kwikhaya lakho. Inokuphulwa ebusweni bomhlaseli wakho. Sebenzisa intambo njengezixhobo eziguquguqukayo.
Azikho izixhobo ezinjalo, kodwa wenza amakhopho amnandi ukuba agcine umgcini ngaphambi kokufika kwamapolisa.
Ubumnyama yisixhobo esicacileyo phantsi kweemeko ezithile. Ukuba uhlaselwa ebusuku, utshintsho lunokuba yiyona "zixhobo" ezifanelekileyo zokukhusela. Ubumnyama nje buyinto enokuyisebenzisa. Oku kukukhusela kwakho "ukuzola" ngokumalunga nogonyamelo. Uyazi kakuhle ikhaya lakho, kodwa umhlaseli akayi. Uyazi nokuba unaphi ezinye izixhobo kunye neendlela zokukhupha. Ubumnyama bunokukunika ixesha elithathayo ukusinda.
Ngaba unxiba ingubo okanye ikreqo? Ingubo okanye ibhatyi ingasetyenziselwa ukukhusela kumhlaseli ngeela okanye esinye isikhali. Imikhono emide ingasetyenziselwa njengesixhobo sokuxhatshazwa okanye ukugxothwa kwamalungu.
Naliphina i-spray iya kuba yindlela ekhethekileyo kwi-gas. Cinga ngako. Luhlobo luni lweentsimbi ezikujikelezayo? Hairspray? Deodorant? Ukuhlaziya umoya? Zonke ezi zi-aerosols ziya kuthatha isenzo kumhlaseli ngokuphantse kunye nepilisi. Ukuba utshaya mhlawumbi uphatha umbane. Khanyisa phambi kokuphalaza kwaye uza kufumana umlambo ogqwesileyo.
Isixhobo esichukumisayo esihle, sikulungele kakhulu. Intambo yomnxeba ijika ngokukhawuleza ibe yinto efanelekileyo yokuguquguquka.
Phonsa imali kwi-pocket yakho phambi kohlaselo. Olunye ulungelelaniso olulungileyo. Iibhola ze-Clutch zibe ngombindi, uya kufumana amandla amakhulu.
Iifolothi zeTennis, iibhola zebhola, i-bumbbells, njl. Zonke zizifundo ezizimeleyo zokuzikhusela kumantombazana. Gcina abambalwa babo kwimoto yakho, nokuba ungayisebenzisi.
Izwi lakho linokuba sisixhobo esilungileyo. Uhlala kunye nawe apho ukhona. Igama livame ukuyeka okanye ubuncinane ukuchaphazela isiqalo sokuhlaselwa. Sebenzisa ikhono elinjalo njengejaji yomlomo. Kukho amagama athile, amabinzana, anconywayo ukuphazamiseka, ukusongelwa okanye ukudideka. Akunakwenzeka ukuwazisa apha. Oku kunokuba ngumxholo wecandelo elithile. Ukuba ufuna, ungafunda malunga nale ncwadi ekhethekileyo.
Le nto yinto ekhethekileyo yezinto ezingasetyenziswa nguwe njengokhuseleko. Kuya kuba ngongqiqo ukuluhlu zonke iindlela onokuhlangabezana nazo. Akukho mntu unokukwazi ukuba uya kufumaneka kuwe kwiimeko ezithile. Kucacile ukuba, abanye abantu baneenqwelo-mveliso ezingaphezulu kwezinye izixhobo ezingaphezulu kwezinye. Khangela izinto ezikuzungezile ngamehlo ahlukeneyo. Khangela izinto ezisekuhlaleni ngokusebenzisa uhlobo lwe "sixhobo". Khawuzibuze ngokucacileyo, yintoni eyenziweyo kwesi sixhobo esisebenzayo? Oku kungasetyenziswa njani? Ngaba le nto iya kusebenza? Funda ukuvavanya ngokufanelekileyo izixhobo ezikhoyo kwiimeko zakho. Ukwazi ukucinga ngaphandle kwebhokisi, ukucinga njengendoda efuna ukuzikhusela yena kunye nabathandekayo bakhe kwiintlanga zentlalo. Izixhobo ezikhoyo zikujikeleze!
Indlela yokwenza i-esile ibe yinyuka
Yintoni efunekayo kwiCrimea?
Ziziphi iindawo ezinobungozi kumadoda?
Iinqwelo ze-salmon e-pinki